Ukusetshenziswa kwempahla yasemkhathini kuletha njalo okusha, futhi izinto zokwakha ezahlukahlukene ziye zangena kancane kancane embonweni wethu. Ubuhle bemabula abukapheli kusukela ezikhathini zasendulo. Imabula yomkhathi ohloniphekile iyahlobisa, njengobuciko ukuthi imvelo iba yini, ingahlangana nengubo yonke yasekhaya kakhulungokwemvelo ku, khombisa okumsulwa nokusha futhi okungenabuhle bobuhle.
Khetha imabula yokwenza udonga lokusetha i-TV, ungakhuthaza isigaba sekamelo lokuhlala lonke ngokushesha. Kunamaphethini alula futhi ashelelayo okugqamisa umqondo wobukhosi, kukhona nemithambo ye-kaleidoscopic yokuletha umthelela oqinile wokubuka.
Ikhishi nendawo yokudlela yiphunga leziqhumane lomuntu lendawo, wonke amakhona agcwele ukunambitheka kwangempela kwekhaya. Ngemabula yokunciphisa isitayela sesikhala, ukubumba indawo yokudlela ehloniphekile neyothando, kuvela imfashini entsha ngokwengeziwe, egcwele ubungqabavu.
Ukuthungwa kwemabula ngokunye ukuthungwa emhlabathini omhlophe kufana nophawu lweyinki olugelezayo, olufana nohlamvu lwemvelo, okwenza imabula inikeze isikhala uhlobo lomuzwa wemvelo wobuhle.
Indlu yokugezela yeMabula, labo abafinyelela endaweni yamehlo banomqondo obizayo ogcwele.Umhlobiso wendawo, noma ukunikezwa okuphelele, ukuheha okuhlala njalo okuhlukile kwemabula yemvelo, lapho kwasakazeka kwaba kukhulu kakhulu.
Imabula eyigugu futhi kanokusho enokwakheka kwemvelo nemikhondo yesikhathi.Uma ufuna umhlobiso wasekhaya osezingeni eliphakeme ungakhetha imabula yokuhlobisa ingaphakathi.Ukuthungwa kwemabula ngeke kukuyekele.